Wifi Wall Lamp CCTV Camera ( One Year Warranty ) – Rocket Online Shopping
Wifi Wall Lamp CCTV Camera ( One Year Warranty )
Home ShopCameraWifi Wall Lamp CCTV Camera ( One Year Warranty )
Wifi Wall Lamp CCTV Camera ( One Year Warranty ) quantity
Categories: Camera, Security.	Tags: 64 support, cct, easy commend, full hd resolution, led မီး ကင်မရာ, loop recording, night vision camera, not cable, two way audion function, waterproof, wifi camera, wifi wall socker, ခြံ cctv, ခြံ ကင်မရာ, သူခိုးဖမ်း.
ခွံဝနျးကလညျးမှောငျတော့ မီးရောCCTV ရော နှဈမြိုး တပျနရေမှာစိုးလို့နှဈမြိုးလုံးတှဲရကျလာတာမရှိဘူးလားမေးတဲ့မိတျဆှမြေားအတှကျ Wall Lamp CCTV Camera လေးလာပါပွီနျော……….။
လငျးအားကောငျးတဲ့ LED မီး 32လုံးပါတဲ့ lamp CCTV Camera လေးသာတပျထားလိုကျရငျတော့သူခိုးတောငျမဟုတျပဲ သူခိုးဆရာကွီးတောငျသငျ့ခွံထဲ ဝငျလာရဲမှာ မဟုတျပါဘူး……..။
Cable တှဆှေဲ ပွီး CCTV တှေ အမြားကွီးတပျရတာထကျ တဈလုံးကောငျးတပျရတာလေးတှကေိုမှ သဘောကတြဲ့ မိတျဆှတှေအေတှကျကတော့ အကွိုကျတှစေ့မှော အမှနျပါပဲ……….။
Resolution ကလညျး Full HD 1080P ဆိုတော့ မကွညျမလငျဖွဈနမှောစိတျမပူပါနဲ့တော့………။ ညအမှောငျထဲမှာပါကွညျလငျပွတျသားစှာရိုကျကူးထားပေးနိုငျပါတယျ……….။
မီး အဖှငျ့အပိတျအတှကျရော CCTV ကွညျ့ဖို့အတှကျရော ဖုနျးတဈလုံးထဲက နေ Commend ပေးလို့ရတယျဆိုတော့ အလနျးစားလေးပါပဲနျော………..😎😎
SD card ကို 64GB ထိ Support ပေးတာကွောငျ့ Video File တှအေမြားကွီးကို သိမျးထားနိုငျပါတယျ………. loop Recording ပါတဲ့အတှကျ လညျး card ပွညျ့သှားရငျ သူ့အလိုလိုပွနျဖကျြပွီး အသဈတှထေပျမှတျထားပေးနိုငျမှာပါ………..။
Two way audio Function ပါတဲ့ အတှကျ နှဈဖကျအပွနျအလှနျစကားပွောနိုငျပါသေးတယျ………..။
ပေ၅၀ ပတျလညျအတှငျး မိတျဆှတေို့ဖုနျးနဲ့တိုကျရိုကျခြိတျဆကျကွညျ့နိုငျပွီး အိမျမှာ Wifi စကျလေးရှိရငျတော့ Wifi စကျလေးနဲ့ခြိတျဆကျပေးထားလိုကျရငျတော့ သငျဘယျနရောရောကျနနေဖေုနျးကနေ internet လေးဖှငျ့ပွီးကွညျ့ရုံပါပဲ………..။
Wifi လှငျ့စကျမရှိတဲ့ မိတျဆှမြေားအတှကျလညျး Sim Router မြားကို အာမခံခကျြအပွညျ့အဝနဲ့ရောငျးခပြေးနတေဲ့ အတှကျ အမွနျဆုံးလာရောကျဝယျယူဖို့ဖိတျချေါပါတယျနျော………။
48500 kyats ( One Year Warranty ) – ICSEE
53500 kyats ( One Year Warranty)- V380
အိမျအရောကျ Delivery လေးလညျးရှိတာမို့ ဖုနျးဆကျပွီး Order တငျတာနဲ့ 48 နာရီအတှငျး အမွနျဆုံးလာပို့ပေးမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့တှငျ6းမွို့နယျကိုတော့ Delivery ခကို Free အနနေဲ့ Rocket မှ ဝနျဆောငျမှု့ပေးနပွေီနျော…
မိမိမွို့နယျကို ဖုနျးဆကျပွောပွီး Order တငျလိုကျပါ…
Order ရနျ နညျးလမျးတှကေတော့ အထကျပါ Phနံပါတျမြားကို စာပို့၊ ဖုနျးဆကျရုံသာမက Viber / Messenger မှ လညျး Order တငျနိုငျပါတယျနျော…
Customer တှကေို နှေးထှေးမှု့တှအေပွညျ့အဝပေးနတေဲ့ Rocket…….
Wifi Wall Lamp CCTV Camera
ခြံဝန်းကလည်းမှောင်တော့ မီးရောCCTV ရော နှစ်မျိုး တပ်နေရမှာစိုးလို့နှစ်မျိုးလုံးတွဲရက်လာတာမရှိဘူးလားမေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် Wall Lamp CCTV Camera လေးလာပါပြီနော်……….။
လင်းအားကောင်းတဲ့ LED မီး 32လုံးပါတဲ့ lamp CCTV Camera လေးသာတပ်ထားလိုက်ရင်တော့သူခိုးတောင်မဟုတ်ပဲ သူခိုးဆရာကြီးတောင်သင့်ခြံထဲ ဝင်လာရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး……..။
Cable တွေဆွဲ ပြီး CCTV တွေ အများကြီးတပ်ရတာထက် တစ်လုံးကောင်းတပ်ရတာလေးတွေကိုမှ သဘောကျတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့ အကြိုက်တွေ့စေမှာ အမှန်ပါပဲ……….။
Resolution ကလည်း Full HD 1080P ဆိုတော့ မကြည်မလင်ဖြစ်နေမှာစိတ်မပူပါနဲ့တော့………။ ညအမှောင်ထဲမှာပါကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်ကူးထားပေးနိုင်ပါတယ်……….။
မီး အဖွင့်အပိတ်အတွက်ရော CCTV ကြည့်ဖို့အတွက်ရော ဖုန်းတစ်လုံးထဲက နေ Commend ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ အလန်းစားလေးပါပဲနော်………..😎😎
SD card ကို 64GB ထိ Support ပေးတာကြောင့် Video File တွေအများကြီးကို သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်………. loop Recording ပါတဲ့အတွက် လည်း card ပြည့်သွားရင် သူ့အလိုလိုပြန်ဖျက်ပြီး အသစ်တွေထပ်မှတ်ထားပေးနိုင်မှာပါ………..။
Two way audio Function ပါတဲ့ အတွက် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စကားပြောနိုင်ပါသေးတယ်………..။
ပေ၅၀ ပတ်လည်အတွင်း မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကြည့်နိုင်ပြီး အိမ်မှာ Wifi စက်လေးရှိရင်တော့ Wifi စက်လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားလိုက်ရင်တော့ သင်ဘယ်နေရာရောက်နေနေဖုန်းကနေ internet လေးဖွင့်ပြီးကြည့်ရုံပါပဲ………..။
Wifi လွှင့်စက်မရှိတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း Sim Router များကို အာမခံချက်အပြည့်အဝနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ အတွက် အမြန်ဆုံးလာရောက်ဝယ်ယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်………။
အိမ်အရောက် Delivery လေးလည်းရှိတာမို့ ဖုန်းဆက်ပြီး Order တင်တာနဲ့ 48 နာရီအတွင်း အမြန်ဆုံးလာပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်6းမြို့နယ်ကိုတော့ Delivery ခကို Free အနေနဲ့ Rocket မှ ဝန်ဆောင်မှု့ပေးနေပြီနော်…
မိမိမြို့နယ်ကို ဖုန်းဆက်ပြောပြီး Order တင်လိုက်ပါ…
Order ရန် နည်းလမ်းတွေကတော့ အထက်ပါ Phနံပါတ်များကို စာပို့၊ ဖုန်းဆက်ရုံသာမက Viber / Messenger မှ လည်း Order တင်နိုင်ပါတယ်နော်…
Customer တွေကို နွေးထွေးမှု့တွေအပြည့်အဝပေးနေတဲ့ Rocket…….
Be the first to review “Wifi Wall Lamp CCTV Camera ( One Year Warranty )” Cancel reply
C6 Magnetic Wifi Night Vision Camera(wifi သံလိုက် ညအမြင်ကင်မရာ)
Spy Car Charger (Or) GPS Car Charger
Camera, Car Accessories, Spy, Travel
Camera, Computer Accessories, Household, Technology
Q4 Wifi Display Dongle Ks50,000.00 Ks40,000.00
Automatic Soap Dispenser Ks40,000.00 Ks22,000.00
Solar LED Tire Wheel Light Ks25,000.00 Ks15,000.00
Training Clicker for dogs Ks10,000.00 Ks2,000.00
M8 Air Mouse Ks39,000.00 Ks29,000.00
Baby GPS Watch(ကလေးGPSနာရီ) Ks45,000.00 Ks35,000.00
Slap Chop Ks10,000.00 Ks4,500.00
T189 Pen Digital Camera Ks34,000.00 Ks30,000.00